Ezinye izinto ezixhasayo kwi-Web Scraping by Semalt Expert
Kwimizuzu embalwa edlulileyo, iqela lokuxhasa i-XBMC liqaphele ukuba abathengi basebenzise impawu yokuhlela imidiya kunye neenkcukacha ngokuzenzekelayo. Ukunyaniseka, i-XBMC ayinayo ingxaki kwiiprogram ozisebenzisayo ukugcina i-media yakho kunye nedatha ye-movie. Ngolwazi lwakho, ukukwazi ukuhlela i-movie yolwazi ngokuzenzekelayo yiyona nto ibalulekileyo kwi-XMBC kwishishini lokuthengisa.
Kwabaqalayo, i-website ye-scraper i-script echanekileyo ekhupha idatha malunga neendaba zakho eziphathekayo kunye nevidiyo ezivela kwiindawo ezizithandayo kunye ezibalulekileyo, kwaye kamva ithumela ulwazi kwi XBMC. Kubabasebenzisi abathembekileyo abangazange baqaphele okwamanje, i-XBMC iqulethwe kwi-web scraper ekwakhelwe kwi-web scraper eqokelela ulwazi lweetethadatha kunye neefayili ezikhuselekileyo ezilungele iimfuno zakho.
Ngokuqhelekileyo, i-XBMC icoca kwaye ihlaziye i-website ye-scrapers ekwakhiwe kuyo ukuba isebenzise abathengi abathembekileyo. Ukuba imfuneko ivela, i-XBMC idibanise iimpawu ezintsha zokunceda abanomdla be-movie baqaphele ubugcisa bobugcisa kunye neendlela zokukhawuleza. Ukuhlaziywa kwiphepha lakho lewebhu elenziwe kwi-website ye-scraper kunye ne-database yakho, uye kwi-'Set Contents Content 'kwaye uvumelane nemimiselo nemibandela emitsha.
Indlela yokukhupha iilayibrari zee-movie kwiifayile ze-nfo
Inani elithile labasebenzisi abathembekileyo beye basebenzisa abaphathi be-nfo ukulungiselela ukukhethwa kweendaba. Ngaba usebenza ekwakheni ukugcinwa kwesimo somfanekiso wakho kunye nenkcazo yemethadatha? I-XBMC isekela ngokupheleleyo olu khetho.
Ukukhupha iilayibrari zakho ezizithandayo kwiifayile ze-nfo, nqakraza kwi-'Lithumela iLayibrari yeVideo 'phantsi kwee' Izicwangciso zevidiyo. ' Ukuthumela izinto ezininzi kunye nedatha eyodwa, imethadatha kunye nemifanekiso yakho.Uku kunceda ukuba wenze iifosti kwiilayibrari zakho.
Nika isandla kwi-yolwazi ye-XBMC
I-XBMC iquka uluntu olusekelwe kwi-intanethi olubandakanya Inkxaso-mboleko ye-XBMC isebenza ekukhuthazeni abasebenzisi ukuba banike umrhumo wee-movie zabo ezithandayo, iifoto kunye nemiboniso yansuku zonke. Okwangoku, i-portal ye-XBMC iqukethe amanqaku amaninzi kunye neengqungquthela, kubonga kubathengi abathembekileyo.
I-XBMC iqulethwe ngabasebenzi abancedisayo abasebenzisa i-intanethi abanikezela ngeenkonzo zokucebisa kwiiblogi kunye nabasebenzisi bokuphela. Nangona kunjalo, unokunceda ukugcina i-website ye-XBMC ye-website ye-scrapers ukuba unayo Ulwazi olufanelekileyo kwi-XML. Ukuba ujamelana nayo nayiphi na imingeni xa ufaka i-movie yakho kunye neelayibrari, qalisa ingxoxo kunye nabasebenzi abancedisayo ukuncedisa.
Unokukunceda ukulungisa ingxaki usebenzisa izifundo kwi-XBMC Wiki kunye ne-website scraper editor. Kubasebenzisi abanolwazi, ukusebenzisa i-website scraper ukudala i-screenshots ezimangalisayo ngumsebenzi olula ukwenza. Nangona kunjalo, amava angaba yinto enzima yokuqala. Ukubonelela ubuchule bakho kunye nezifundo zokugcina abaqalayo nge-intanethi yabo.
I-Web scrapers idlala indima ebalulekileyo ekuncediseni iiblogi kunye nabathandi be-movie badibanisa iilayibrari zabo ezifunayo. I-Scrapers ivumela abanomdla ukuba bajikeleze ngeendaba ezikhoyo nakwiilayibrari ze-movie ngaphandle kokuhlangabezana nemingeni. Ungavumeli ukuphathwa kwedatha kudonsa iphrojekthi yakho ye-intanethi phantsi. Ungasebenzisa i-scrapers yewebhusayithi ukufumana idatha eya kuhlangabezana neemfuno zabathengi bakho kunye neenkcukacha. Ungasebenzisa kwakhona izixhobo ezinamandla kakhulu ze-XBMC ukulungiselela nokulawula iinkcukacha zakho zeenkcukacha.